विवाहमा साइँली औंलामा औंठी किन लगाइन्छ ? यसको प्रचलन कहाबाट सुरु भयो , जान्नुहोस::Nepal's Online News Portal
विवाहमा साइँली औंलामा औंठी किन लगाइन्छ ? यसको प्रचलन कहाबाट सुरु भयो , जान्नुहोस
सोम, अशोज १५, २०७५
असोज १५/ बिवाहको बेला दुलहा दुलहीले एकआपसको साइँली औंलामा औठी लगाइदिन्छन् । साइँली औंलामै औठी किन लगाइन्छ भनेर धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । विवाहको चिन्ह स्वरुप औठी लगाइदिने चलन इशापूर्व ३००० मा शुरू भएको थियो ।
त्यसबेलादेखी विवाहमा औठी लगाउने चल्दै आएको छ ।
पहिला औठी दुलहाका पितालाई विवाहको चिन्ह स्वरुप दिने चलन थियो । यो परम्परा प्राचीन रोमन र ग्रीक समयमा चलेको मानिन्छ । त्यतिबेला बायाँ हातको साइँली औंलामा आैठी लगाइदिँदा सीधा मनसँग सम्बन्ध हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको थियो ।
युरोपियन राष्ट्रहरूमा औठीको परम्परा बढी पाइन्छ । विवाहको औंठीले परिवारप्रतिको जिम्मेवार हुने र जिन्दगीभर श्रीमतीलाई रक्षा गर्ने सुत्रका रुपमा औंठीलाई लिने चलन छ । एक आपसमा प्रेम साटासाट गर्ने माध्यमका रुपमा पनि औंठी लगाइन्छ ।